Waqtiyada Bilowga Dugsiga - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Waqtiyada Bilowga Dugsiga Robbinsdale si loogu beddelo Sannad-dugsiyeedka 2022-23
Guddigu wuxuu ku hawlan yahay geeddi-socod dhammaystiran si loo baadho faa'iidooyinka beddelaadda wakhtiyada bilowga dugsiga laga soo bilaabo sannad-dugsiyeedka 2017-2018. Himilada Guddigu waxay ahayd in loo beddelo dugsiyada sare waqti dambe oo bilow ah iyadoo la dhimayo kharashyada gaadiidka ee dheeraadka ah.
Bishii Diseembar 2020, Guddiga Dugsiga waxay u codeeyeen in la beddelo waqtiyada bilowga dugsiga, laakiin ma aysan go'aamin goorta isbeddelku dhacayo. Guddigu wuxuu u codeeyey Isniinta, Abriil 19 in la beddelo waqtiyada bilowga dugsiga laga bilaabo sannad-dugsiyeedka 2022-2023. Codbixintu waxay ka turjumaysay ansixinta jadwalka waqtiga jalaska kale.
Waqtiyada Bilowga Saadaasha
Natiijooyinka Sahanka Febraayo 2020
Maqaallada Cilmi-baarista / Dib-u-eegista Suugaanta
2022-2023 Sannad Dugsiyeedka
Gudiga Dugsiyadeenu, iyagoo la kaashanaya maamulka Degmada, waxay ku dadaalayaan inay la kulmaan baahiyaha bulsho-shucuureed ee ardaydeena iyadoo ay ka go'an tahay heer sare ee tacliimeed ee dhammaan, sida lagu muujiyey Aragtidayada Midaysan ee Degmada.
Falanqaynta waqtiga gambaleelka, toddobo jadwal oo suurtagal ah ayaa loo horkeenay Guddiga inta lagu gudajiray sanad dugsiyeedka 2019-2020. Guddigu wuxuu doortay laba ka mid ah toddobada xaaladood (seenyo lix iyo toddobo) si horay loogu socdo. Bishii Diseembar 7, 2020, Guddigu wuxuu ku dhaafay seenyo lix cod shan ah labo. Doorashadan waxay u baahan tahay 123 dariiq, iyadoo $ 53,000 laga dhimayo kharashka sanadlaha ah. Guud ahaan, jidadka waxaa loo kala qeybin doonaa seddex heer.
Bishii Abriil 19, 2021, Guddigu wuxuu u codeeyay in la beddelo waqtiyada bilowga dugsiga ee sannad-dugsiyeedka 2022-2023 iyadoo la oggolaaday jadwalka waqtiga jalaska beddelka ah ee dhacdada lixaad.
Waqtiyada Dawanka ee Saadaasha Kale
La ansixiyay Abriil 19, 2021
8 subaxnimo ilaa 2:20 galabnimo - dugsiyada hoose marka laga reebo RSI / SEA
8:05 subaxnimo ilaa 2:30 pm - Khadadka XAJIGA CADAABKA ah
8 subaxnimo ilaa 2:45 galabnimo - FAIR Crystal
8:30 subaxnimo ilaa 3:20 galabnimo - dugsiyada sare
9:15 subaxnimo ilaa 4 galabnimo - dugsiyada dhexe
9:20 subaxnimo ilaa 3:40 pm - RSI iyo SEA
Iyada oo ay weheliyaan maamulka, Guddiga Dugsiga ayaa dib u eegay oo qiimeeyay maqaallo badan oo cilmi baaris ah.
Xog aruurinta oo loo soo diray emaylka, ardayda dugsiga sare iyo shaqaalaha Janaayo 2019
Dood wadaagga bulshada 'World Cafe' Caamsaa 26, 2019
Fadhiga Shaqada ee Gudiga Dugsiga - dulmar guud oo ku saabsan doodaha bulshada ee World Cafe iyo xusuusqor leh labo xaaladood oo qeexan Maarso 4, 2019
Dood wadaagga bulshada 'World Cafe' Maarso 19, 2019
Shirka Guddiga Latalinta Waqtiga Bilowga Dugsiga Abriil 16, 2019
Fadhiga Shaqada ee Gudiga Dugsiga - dulmar guud oo ku saabsan doodaha bulshada adduunka ee kafateeriyada, kulanka guddi-hoosaadka bisha Abriil iyo jawaabaha tirada ee sahannada. May 6, 2019
Kalfadhigii Shaqada ee Gudiga Dugsiga - Xalalkii Gaadiidka ee Koowaad waxay bixiyeen dulmar guud iyo shuruudaha xogta ee habka falanqaynta waqtiga gambaleelka, Guddina waxay ka wada hadleen faa'iidooyinka isbedelka waqtiga bilowga dugsiga. Sebtember 9, 2019
Fadhiga Shaqada ee Gudiga Dugsiga - Latalinta Ardayda ee Gudiga Waxbarashada (SABE) oo sanadle ah oo lala yeesho Gudiga, iyadoo laga doodayo isbedelka waqtiyada bilowga iyo saamaynta ardayda. Nofeembar 12, 2019
Kalfadhiga Shaqada Gudiga Dugsiga - Kadib isbarbar dhiga qiimaha saddexda ikhtiyaar ee ugu horeysa (oo lagu soo bandhigay Sebtember 9, 2019 Kalfadhiga Shaqada), Kooxda hagta Xallinta Gaadiidka Koowaad ayaa la weydiiyay inay helaan xaalad bixinaysa waqti dambe oo ay kubilaabaan ardayda dugsiga sare halka aysan ahayn si xun u saameyn miisaaniyadda. Fursadaha cusubi waxay ku taxan yihiin ikhtiyaarka afaraad iyo shan ee soo bandhigidda. Diisambar 2, 2019
Kalfadhigii Shaqada ee Gudiga Dugsiga - Xal u helida Gaadiidka Koowaad waxay bixiyeen bandhig kale oo lagu daray labo xaaladood (6 iyo 7). Febraayo 3, 2020
Sahan loo diray qoysaska degmada, ardayda dugsiga sare (6-11) iyo shaqaalaha. Febraayo 20-28
Kalfadhiga Shaqada Gudiga Dugsiga - Dib u eegista xogta Sahanka Bilowga Dugsiga 4 Meey, 2020
Guddiga La-talinta Waqtiga Bilowga kulan iskaashi ah 28 Meey, 2020
Fadhiga Shaqada ee Gudiga Dugsiga - Cusboonaysiinta iyo talaabooyinka xiga ; ka wada hadalnay qoraalada guddiga la-talinta iyo dib-u-eegista xogta sahanka; talo bixinta ajandaha bisha Ogosto. Juun 1, 2020
Sanad Dugsiyeedka 2020-2021
Kalfadhiga Shaqada ee Gudiga Dugsiga - Soo-koobidda ku saabsan xilliyada bilowga dugsiga Ogast 3, 2020
Shirka Joogtada ah ee Gudiga Dugsiga - Ansixinta talaabooyinka xiga ee ku wajahan badalashada waqtiyada bilowga dugsiga sanad dugsiyeedka 2021-2022. Guddigu wuxuu u codeeyey inuu xaqiijiyo ballanqaadkiisa ku aaddan xilliyada bilowga dugsiga. Mooshinku wuxuu u gudbay 5 illaa 2, iyadoo Tyrrell iyo Lindberg ay u codeeyeen maya; Vento, Boone, Bassett, Herring iyo Sant ayaa u codeeyay haa. Agoosto 17, 2020
Fadhiga Shaqada ee Gudiga Dugsiga - Guddigu wuxuu eegay kharashka / faa'iidooyinka keenista gaadiidka guriga, maadaama ay laxirirto dhacdooyinka 6 iyo 7. Gudiga wuxuu dib u eegay waqtiyada bilowga iskuulka, saameynta ay ku yeelan karto gaadiidka RFP ee sanadka soo socda waxayna ka wada hadleen suurtagalnimada horumarka ' gaadiidka 'guriga' halkii aad ka adeegsan lahayd adeeggaas. Nofeembar 16, 2020
Shirka Ganacsiga Gudiga Dugsiga - Guddigu wuxuu ucodeeyay seenyooyinka 6 iyo 7, iyadoo dhacdada 6 si guul ah loogu gudbiyay cod 5-2 ah. Diisambar 7, 2020
Horumarinta Gudida Hogaanka Waqtiga Bilowga Dugsiyada iyo guddi hoosaadyada Diisambar 2020 - Janaayo 2021
Gudiga Hogaaminta iyo Kulamada Guddi Hoosaadka Janaayo - Maarso 2021
Fadhiga Shaqada ee Gudiga Dugsiga - warbixin guddi-hoosaad Abriil 6, 2021
Shirka Joogtada ah ee Gudiga Dugsiga - Guddigu wuxuu u codeeyay in la beddelo waqtiyada bilowga dugsiga laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2022-2023. Intaa waxaa sii dheer, codbixintu waxay ka turjumaysay oggolaanshaha jadwalka waqtiga jalaska beddelka ah ee dhacdada 6. Abriil 19, 2021
Waqtiyada Kale ee La Saadaaliyay ee Dhacdada Lixaad
Waxaa Ansixiyay Golaha Dugsiga Abril 19, 2021
8 subaxnimo ilaa 2:20 pm
Kaymaha, Lakeview, Meadow Lake, Neill, Noble, Northport, Sonnesyn, Zachary Lane
8 subaxnimo ilaa 2:45 pm
8:05 am ilaa 2:30 pm
8:30 subaxnimo ilaa 3:20 pm
Armstrong, Cooper, Robbinsdale Academy-Highview
9:15 subaxnimo ilaa 4 galabnimo
Dugsiga Dhexe ee Plymouth, Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale, Dugsiga Dhexe ee Sandburg
9:20 subaxnimo ilaa 3:40 galabnimo
Wax isbadal ah looma sameyn doono Rajada Cusub ee Caruurnimada Hore iyo Xarunta Kalaguurka Robbinsdale
Waqtiyada Bilowga ah ee Dhacdooyinka Lixaad
7:45 subaxnimo ilaa 2:05 pm
Kaymaha, Neill, Noble, Northport, RSI, SEA, Sonnesyn, Zachary Lane
8:35 subaxnimo ilaa 3:25 galabnimo
9:05 subaxnimo ilaa 3:25 galabnimo
Lakeview, balliga Meadow
9:20 subaxnimo ilaa 4:05 pm
Dugsiga Dhexe Robbinsdale, Dugsiga Dhexe Sandburg
9:30 subaxnimo ilaa 4:15 pm
FAIR School Crystal, Dugsiga Dhexe ee Plymouth
9:35 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo
Bishii Febraayo 2020, Degmadu waxay daraasad ku sameysay waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah, ardayda dugsiga sare (fasallada 6-11) iyo shaqaalaha ku saabsan Seenario 6 iyo 7.
Natiijooyinka sahanka waalidka / masuulka
Dheellitir wakhtiyada bilowga dhammaan heerarka (seenyada 6): doorashada 1aad boqolkiiba 31
Waalidiinta aan haysan ardayga da'da dugsiga hoose waxay u badan tahay inay si wanaagsan uga jawaabaan la qabsiga waqtiyada bilowga ee dhammaan heerarka.
In ka badan kalabar (52%) waalidiinta aan haysan arday da da dugsiga sare dhigta ayaa tilmaamaya in doorashadan ay ku adkaan doonto qoyskooda.
Isku hagaaji waqtiyada bilowga ee dugsiyada sare (seenyo 7): doorashada 1aad boqolkiiba 29
Guud ahaan, waalidiinta haysta ugu yaraan hal arday dugsiga sare waxay uga dhowdahay waalidiinta kale inay si wanaagsan uga jawaabaan la qabsiga waqtiga bilowga ee heerarka oo dhan.
Hayso waqtiyada bilowga ee hadda jira: doorashada 1aad boqolkiiba 39
Guud ahaan, waalidiinta haysta ugu yaraan hal arday da'da dugsiga hoose waxay u badan tahay waalidiinta kale inay uga jawaabaan si wanaagsan iyadoo la ilaalinayo waqtiyada bilowga hadda.
Natiijooyinka sahanka ardayda dugsiga sare
Isku hagaaji waqtiyada bilowga dhammaan heerarka (seenyada 6): doorashada 1aad ee boqolkiiba 28
Isku hagaaji waqtiyada bilowga ee dugsiyada sare (seenyo 7): doorashada 1aad boqolkiiba 41
Hayso waqtiyada bilowga ee hadda jira: doorashada 1aad boqolkiiba 30
Natiijooyinka sahanka shaqaalaha
Dheellitir waqtiyada bilowga dhammaan heerarka (seenyada 6): doorashada 1aad boqolkiiba 40
Isku hagaaji waqtiyada bilowga ee dugsiyada sare (seenyo 7): doorashada 1aad boqolkiiba 21
Hayso waqtiyada bilowga hadda: Xulashada 1aad ee boqolkiiba 38
La cusbooneysiiyay Maarso 21, 2018
Bayaanka Siyaasadeed ee ku saabsan Waqtiyada Bilowga Dugsiga ee dhalinyarada
Akadeemiyada Mareykanka ee Cudurrada Caafimaadka (2014)
Isku xidhka qodobka
Akadamiyada Caafimaadka Caruurta ee Mareykanka waxay u aqoonsan tahay hurdo aan ku filnayn dhalinyarada qaan-gaar ah inay tahay arrin muhiim ah oo caafimaadka bulshada ah oo si weyn u saameysa caafimaadka iyo badbaadada, iyo sidoo kale guusha tacliimeed, ee ardayda dugsiga dhexe iyo sare ee qarankeena. In kasta oo arrimo dhowr ah, oo ay ku jiraan isbeddelada nafleyda ee hurdada la xiriirta qaan-gaarnimada, xulashooyinka hab-nololeedka, iyo dalabaadka tacliimeed, ay si xun u saameynayso awoodda ardayda dugsiga dhexe iyo kuwa sare ay ku heli karaan hurdo ku filan, haddana caddayntu waxay si xoog leh u muujineysaa xilliyadii hore ee iskuulka la bilaabay (ie 8:30 AM) oo ah furaha wax ka beddelka lagu sameyn karo ee hurdada oo aan ku filnayn, iyo sidoo kale khalkhalka qulqulka wareegga, ee dadkan Intaa waxaa sii dheer, hay'ad cilmi baaris ah oo la taaban karo ayaa hadda muujisay in dib u dhigista waqtiyada bilowga dugsigu ay tahay tallaabo wax ku ool u leh hurdo la'aanta joogtada ah waxayna leedahay tiro aad u tiro badan faa iidooyinka u leh ardayda marka la eego caafimaadka jirka iyo maskaxda, amniga, iyo gaaritaanka tacliinta. Akadamiyada Caafimaadka Caruurta ee Mareykanka waxay si xoogan u taageertaa dadaalada degmooyinka iskuulada si loo wanaajiyo hurdada ardayda waxayna ku boorineysaa dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe inay ujeedadoodu tahay waqtiyada bilowga ee u ogolaanaya ardayda fursad ay ku gaaraan heerarka hurdada ee ugu wanaagsan (8.5-9.5 saacadood) iyo si loo hagaajiyo jirka (tusaale, hoos u dhigista halista buurnida) iyo maskaxda (tusaale heerarka hoose ee niyadjabka) caafimaadka, nabadgelyada (tusaale shilalka wadista ee lulmaya), waxqabadka tacliinta, iyo tayada nolosha.
In kasta oo faa'iidooyin badan oo la xidhiidha hurdo badan markay dugsiyadu dib u dhigaan xilliyada bilowga, saamaynta saafiga ah ee ku-guuleysiga ardayga si isdaba-joog ah looma ogaanin inay tira-koob ahaan muhiim tahay.
Ku Bilow Dugsiga Sare Goor dambe Natiijooyinka Tacliinta ee Ka Wanaagsan
Machadka Brookings (2017)
Jacob iyo Rockoff waxay soo jeedinayaan sadex dariiqo oo qiimo jaban oo lagu abaabulo iskuulada si loo kordhiyo waxqabadka ardayda: isku darka dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe oo laga dhigo dhismayaal keliya; hagaajinta siyaasadaha meeleynta macallimiinta; isla markaana u bilaabaya dugsiga gelinka dambe ardayda dugsiga dhexe iyo sare. Yacquub iyo Rockoff soo jeedintooda, fikraddan seddexaad waxay umuuqataa mid si gaar ah wax looga qaban karo: Dhismayaasha cusub looma baahna in la dhiso ama dib loo habeeyo, dabeecadda shaqooyinka macallimiintana si qunyar leh uma badali doonaan. Degmooyinka iskuullada ee bilaaba dugsiyadda hoose mar dambe iyo kuwa sare goor hore ayaa laga yaabaa inay isweydaarsadaan jadwalkaan iyada oo aan la helin carqalad weyn oo xagga gaadiidka ah. Tani waxay u oggolaan doontaa dhallinta qaangaarka ah inay seexdaan hadhow sidaas darteedna ay ku yimaadaan dugsiga iyagoo diyaar u ah inay waxbartaan.
Natiijooyinka wax ku oolka ah ee la xiriira beddelka waqtiyada bilowga waxaa ka mid ah
Kordhinta yar ee ku-guuleysiga imtixaanada la dejiyay;
Faa'iidooyin caafimaad iyo badbaado oo togan oo ay ugu wacan tahay cilmiga jir ahaaneed ee dhalinyarada; iyo
Darawalada dhalinyarada ah ee feejignaan badan subaxdii.
Natiijooyinka taban ee la xiriira beddelka waqtiyada bilowga waxaa ka mid ah:
Amniga iyo arrimaha daryeelka carruurta ee la xiriira carruurta dugsiga hoose oo leh maalmo laga bilaabo laba saacadood ka hor;
Isuduwidda arrimaha ku saabsan isboortiga dugsiga ka dib iyo waxqabadyada manhajka ardayda dugsiga sare; iyo
Kordhinta kharashyada gaadiidka haddii waqtiga bilowgu isbeddelo uusan noqon is-rogid u dhexeeya dugsiga hoose iyo dugsiga sare.
Hurdo aan ku filnayn iyo Farqiga Kasbashada Xaaladda Dhaqaale-Bulsheedka
Cilmi-baaris lala sameeyay dadka waaweyn iyo carruurta ayaa muujisay in hurdadu ay kaalin muhiim ah oo adag ka qaadato nidaamyo kala duwan oo xagga jir ahaaneed ah oo ilaaliya caafimaadka isla markaana dhiirrigeliya waxqabadka ugu wanaagsan ee dhinacyada badan. Carruurta, dugsigu waa shey muhiim ah oo shaqeynaya, cilmi baaris soo baxana waxay ku xirtaa hurdo iyo gaaritaanka tacliinta. Carruur badan oo ka soo jeeda qoysaska heerka dhaqaale (SES) ee hooseeya ayaa si xun u seexda, oo marka hurdadooda la jabiyo, saamaynta ay ku yeelanayso garashada garashada iyo ku guuleysiga tacliimeed ayaa ka weynaan karta carruurta liidata. Fahamka sida hurdadu u saameyso waxqabadka ayaa kobcin kara aragtida la xiriirta farqiga u dhexeeya guusha ee u dhexeeya kooxaha carruurta ee ku kala duwan SES, waxayna ka kooban tahay diiradda cusub ee ka hortagga iyo ka-hortagga.
Hurdadu waa qayb ka mid ah firfircoonida nidaamyada kala duwan, laakiin haddii lagu muujiyo inay xisaabtamayso qayb kasta oo muhiim ah oo ka mid ah xiriirka u dhexeeya SES iyo waxqabadka dugsiga, waxaa jira saameyn muhiim ah oo ku yeelan kara kobcinta aragtida iyo dejinta faragelinta Weli lama go'aamin, si kastaba ha noqotee, haddii faragelinta hurdada keligood ama ay weheliso waxqabadyada tooska ah ee tacliinta lagu guuleysan doono hagaajinta hanashada dhammaan carruurta iyo yareynta farqiga u dhexeeya gaaritaanka SES.
Hurdada, Hurdada iyo Waqtiyada Bilowga Dugsiga: Daraasad Hordhac ah
Dexter, D .; Bijwadia, J .; Schilling, D .; Applebaugh, G. (2003)
Gundhig: Ardayda dugsiga sare waxaa lagu soo warramey inay hurdo xad-dhaaf ah qabaan, taasoo keentay hoos u dhac ku yimid waxqabadka tacliimeed, kororka dhibaatooyinka nafsaani-bulsho iyo halista sii kordheysa ee cudurrada iyo dhimashada shilalka. Waqtiyada bilowga dugsiga ee hore ayaa la xusay inay ka qayb qaataan dhibaatadan. Warbixintani waxay isku dayeysaa inay xaqiijiso xiriirka xilliyada bilowga dugsiga hurdo yaraanta iyo hurdada oo kordhay.
Hababka: Waxaannu baarnay ardayda dhigata fasallada labaad iyo kuwa hoose ee 2 dugsi sare oo maxalli ah oo leh waqtiyo kala duwan oo bilow ah waxaanna cabbirnay qadarka waqtiga hurdada iyo hurdada.
Natiijooyinka: Waxaan ogaanay in ardayda bilowga dugsiga bilowga ah ay soo sheegeen waqtiga hurdada oo yaraaday iyo hurdo ka badan dhiggooda dugsiga dambe ee ay bilaabayaan.
Gunaanad: Waqtiyada hore ee bilowga dugsiga waxay la xiriiraan warbixinnada ardayda ee hurdo yarida iyo hurdada oo kordhay. Daraasado dheeraad ah oo ku saabsan kooxaha waaweyn ayaa lagula talinayaa iyada oo la fiirinayo saameynta weyn ee ay leedahay hurdo la'aanta kooxdan da 'ahaan.
Waqtiyadii dambe ee bilowga dugsiyadu waxay ardayda ka wareejiyeen heerkii u jiifay cudurada ee ay u yaraadeen heerka hurdo ee caadiga ah.
Hore ma u kacaysaa? Saameynta Waqtiyada Bilowga Maalinlaha ee Waxqabadka Tacliinta
Xiriirinta maqaalka (PDF)
Degmooyinka iskuullada xaafaduhu inta badan way la yaabaan waqtiyada bilowga ee dugsiyadooda si loo yareeyo kharashka baska. Warqadani waxay isticmaashaa xogta dhammaan ardayda dugsiga dhexe ee Wake County, NC laga bilaabo 1999-2006 si ay u darsaan saameynta xilliyada bilowga ee waxqabadka tacliimeed. Aniga oo adeegsanaya kala duwanaanshaha xilliyada bilowga ee gudaha iyo guud ahaan dugsiyada, waxaan ogaaday in bilowga dugsiga saacad kadib ay horseedayso faa'iido saddex-boqolley ah oo isugu jirta xisaab iyo dhibco akhris. Isticmaalka kaliya kala duwanaanshaha waqtiyada bilowga ah ee iskuulada gudaheeda waqti ka dib, saameyntu waa faa'iido laba boqolley ah Waxaan helay caddeyn ah in waqtiyada bilowga dambe ay la xiriiraan maqnaanshaha oo yaraada, waqti yar oo aan ku qaato daawashada telefishanka iyo waqti badan oo lagu qaato shaqada guriga, taasoo muujineysa in arrimahan ay sharxi karaan sababta hadhow ardayda ay u bilaabayaan ay u leeyihiin dhibco imtixaan sare.
Guulihii laga gaadhay 2-3 boqolkiiba dhibcaha ayaa laga filan karaa dib u dhigista waqtiyada bilowga dugsiga saacad.
Maxay Waalidiintu uga Baqayaan Waqtiyada Bilaabidda Dugsiyada Dambe?
In kasta oo cilmi-baaris la muujinayo xilliyada bilowga hore ee dugsiga aan lagu dhigin baahida hurdo ee qaan-gaarka, taas oo saameyn taban ku yeelata caafimaadka maskaxda iyo jirka iyo sidoo kale waxqabadka akadeemiyadda, degmooyin badan oo iskuullo ah ayaa ku dhex milmay dood sannado badan qaadatay oo ku saabsan arrinta. Ciyaaraha, waxqabadka dugsiga kadib, iyo kharashyada gaadiidka ayaa u muuqda inay yihiin caqabadaha aasaasiga ah ee dib u dhigaya waqtiyada bilowga dugsiga.
Hurdada iyo xaadiritaanka dugsiga ee qaangaarnimada: Natiijooyinka daraasad ballaaran oo ku saleysan dadweynaha
Hysing, M .; Haugland, S.; Stormark, K.; Tormod, B.; Sivertsen, B. (2014)
Gundhig: Ujeeddada daraasaddan waxay ahayd in la baaro xiriirka ka dhexeeya hurdada dhallinta iyo ka-maqnaanshaha dugsiga.
Hababka: Daraasad ballaaran oo ku saleysan dadweynaha oo laga sameeyay Norway oo la qabtay 2012, daraasadda dhalinyarada @ hordaland, ayaa lagu wareystay 8,347 dhalinyaro ah oo da'doodu tahay 16-19 sano (54% gabdho ah). Qiyaasaha hurdada ee la soo sheegay ayaa waxaa ka mid ahaa waqtiga jiifka, waqtiga hurdada, mudada hurdada, waxtarka hurdada, daahitaanka bilowga hurdada (SOL), hurdada ka dib bilawga hurdada (WASO), calaamadaha hurdo la'aanta, daalka, iyo hurdada Kaqeybgalka iskuulka waxaa lagahelay diiwaan gelinta maamulka qaranka.
Natiijooyinka: Inta badan cabbirada hurdada ayaa lala xiriiriyay halista sii kordheysa ee ka-maqnaanshaha dugsiga. Ka dib markii la isku hagaajiyay xaaladda jinsiga iyo dhaqaalaha, muddada hurdada gaaban iyo hurdo yaraanta ayaa ahaa cabbirada hurdada ee ugu sarreysa ee ka-soo-qaybgal la'aanta (OR = 4.61, CI 95% 3.29-6.46) iyo (OR = 3.26, CI 95% 2.67- 3.99 ), siday u kala horreeyaan). Sidoo kale, isdhaafka waqtiga sariirta oo aad u saraysa dhamaadka usbuuca iyo maalmaha shaqada ayaa lala xiriiriyay imaatin la’aan (OR = 2.43, CI 95% 1.93-2.02), iyo waliba hurdo la’aan (OR = 2.25, CI% 1.89-2.67) iyo daal maalinnimo (OR = 2.09 , CI 95% 1.70-2.57). Ururadu xoogaa way yaraadeen ka dib hagaajin dheeri ah oo niyadjabka ah, laakiin waxay ku sii ahaadeen mid si weyn ugu habboon qaabkii loo qaabeeyey
Gunaanad: Xiriirka la muujiyey ee u dhexeeya dhibaatooyinka hurdo la'aanta iyo maqnaanshaha dugsiga ayaa soo jeedinaya in qiimeynta taxaddarka leh ee hurdada la damaanad qaado marka qaan-gaarka ay la yimaadaan maqnaansho ballaaran oo iskuul. Daraasadaha mustaqbalka ee ku saabsan sida xiriirka ka maqnaanshaha-iskuulka ee qaan-gaarnimada saameyn ugu yeelan karo xiriir dambe ee shaqada qaangaarnimada.
Faa'iidooyinka waqtiyada bilowga dambe waxaa ugu horreyn lagu helay maqnaanshaha oo yaraaday.
Abaabulka Dugsiyada si loo Hormariyo Kasbashada Ardayda: Waqtiyada Bilowga, Qaabeynta Fasallada, iyo Meeleynta Macallimiinta
Yacquub, B .; Rockoff, J. (2011)
Soo jeedinta dib-u-habeynta waxbarashadu waxay inta badan ku saleysan tahay isbeddello siyaasadeed oo heer sare ah ama riwaayado ah, kuwaas oo intooda badani qaali yihiin, muran siyaasadeedna ka taagan yahay, ama labadaba. Warqaddan, waxaan ku doodi doonnaa in doodaha ku saabsan siyaasadahaan "iftimaya" ay mugdi geliyeen jihooyin muhiim u ah kor u qaadista waxqabadka ardayda - oo ah, dib-u-habeyn lagu sameeyo maamulka ama abaabulka dugsiyada. Iyagoo hubinaya in "tareenadu ay ku socdaan waqtigooda" ayna diirada saaraan go'aamada maalinlaha ah ee ku lug leh maaraynta nidaamka waxbarida, maamulayaasha iskuulka iyo degmadu waxay awood u yeelan karaan inay si weyn u kordhiyaan barashada ardayga qiime jaban.
Warqaddan, waxaan ku sharaxeynaa seddex dib-u-habeyn urureed oo caddeyn dhowaan la soo saaray ay muujinayaan inay suurtagal tahay in lagu kordhiyo waxqabadka ardayda K-12 kharashyada ugu yar: (1) Bilaabidda dugsiga xilli dambe ee ardayda dugsiga dhexe iyo sare; (2) Ka wareejinta nidaam leh dugsiyo hoose iyo kuwa dhexe oo u kala wareegaya dugsiyo u adeega ardayda xanaanada illaa fasalka sideedaad; (3) Maareynta shaqooyinka macallimiinta iyadoo isha lagu haayo sare u qaadista guusha ardayga (tusaale u oggolaanshaha macallimiinta inay helaan khibrad iyagoo wax ku baraya isla heerkaas fasallo sannado badan ah ama ay leeyihiin macallimiin ku takhasusay maadada ay ugu muuqdaan kuwa ugu waxtarka badan).
Waxaan si qunyar socod ah u qiyaaseynaa in saamiga faa'iidooyinka kharashaadka uu yahay 9 ilaa 1 marka la gaaro waqtiyada bilowga dugsiga ee dambe iyo 40 ilaa 1 dib u habaynta dugsiga dhexe. Xisaabinta qiimaha-macaashka saxda ah uma suurta geli karo dejinta dib-u-habeynta meeleynta macallimiinta ee aan sharraxnay, laakiin waxaan ku doodi doonnaa in kharashka soo-jeedinta noocan oo kale ah ay u badan tahay inuu aad u yar yahay marka loo eego dheefaha ardayda. In kasta oo aan garwaaqsan nahay in dib-u-habeyntaan gaarka ah aysan ku habboonayn ama suurtagal ahayn degmo kasta, waxaan ku dhiirrigelinaynaa dugsiga, degmada, iyo hoggaamiyeyaasha waxbarashada gobolka inay ka dhigaan maamulka, abaabulka, iyo howlaha iskuullada inay noqdaan qayb caan ka ah wadahadalka ku saabsan sida loo korinayo ardayga guul.
Faa'iidooyinka ku dhowaad 0.15 leexashooyinka caadiga ah ayaa laga fili karaa dib u dhigista waqtiyada bilowga dugsiga ee dugsiga dhexe iyo sare, taasoo saameyn ku dhow lix meelood meel cabbirka nusqaamaha. Kharashka gaadiidka iyo qorsheynta iyo sidoo kale isboortiga banaanka, si kastaba ha noqotee, waa in la tixgeliyaa kahor intaadan dhaqaaqin si dib loogu dhigo waqtiyada bilowga dugsiga.
Dib u dhaca waqtiyada bilowga dugsiga iyo hurdada qaangaarka: Dib u eegis nidaamsan ee caddaynta tijaabada ah
Iskuulo badan ayaa bilaabay waqtiyada bilowga subaxa dambe si loo wanaajiyo hurdada, tacliinta, iyo natiijooyinka kale iyadoo laga jawaabayo iswaafaq la'aanta udhaxeysa wareega dhalinyarada iyo waqtiyada bilowga subaxa hore. Si kastaba ha noqotee, ma jirin isku-dhafan nidaamsan ee caddaynta saameynta dhaqankan.
Si loo baaro saameynta dib u dhaca waqtiga bilowga dugsiga ee hurdada ardayda, caafimaadka, iyo natiijooyinka tacliimeed, keydka macluumaadka elektaroonigga ah si nidaamsan ayaa loo baaray waxaana la soo saaray xogta iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha warbixinta la doorbiday ee dib u eegista nidaamsan iyo tilmaamaha-falanqaynta (PRISMA). Lix daraasadood ayaa ku qancay shuruudaha xulashada waxayna isticmaaleen post-post, xakameyn la'aan (n = 3), tijaabin tijaabo ah oo la kala soocay (n = 2), iyo qaabab tijaabo ah (n = 1). Waqtiyada bilowga iskuulka ayaa dib loo dhigay 25-60 daqiiqo, waxaana u dhiganta, wadarta waqtiga hurdada oo ka badneyd 25 ilaa 77 daqiiqo usbuucii. Daraasadaha qaarkood waxay muujiyeen hurdo yaraanta maalintii, niyadjabka, isticmaalka kafeega, daahida fasalka, iyo dhibaatada soo jeedka. Guud ahaan, caddayntu waxay taageertaa natiijooyinkii ugu dambeeyay ee daraasad aan tijaabo ahayn waxayna ku baaqeysaa siyaasad u doodda dib-u-dhigista iskuulka oo dib loo dhigo waqtiga hurdada. Tani waxay soo bandhigeysaa xalka muddada fog ee xaddidaadda hurdo la'aanta muddada qaan-gaarnimada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira baahi loo qabo naqshadaha daraasad ee kala sooc la'aanta ah iyo ka warbixinta natiijooyinka isdaba jooga ah, oo ay ku jiraan ujeedooyinka hurdada ee ujeedada iyo cabbiraadaha isdaba jooga ah ee caafimaadka iyo waxqabadka tacliinta
Waqtiyada dambe ee bilowga dugsigu waxay yareeyaan daahitaanka iyo maqnaanshaha; si kastaba ha noqotee, cilmi baaris nidaamsan oo ku saabsan saameynta guusha tacliimeed ayaa loo baahan yahay in la qabto.
Waqtiyada Beddelaya: Natiijooyinka laga helay Daraasadii ugu Horreysay ee Muddada Dheer ee Waqtiyada Bilowga Dugsiga Sare
Horraantii 1990-meeyadii, cilmi-baaris caafimaad ayaa lagu ogaaday in dhallinyaradu ay leeyihiin habnoloji ahaan qaabab kala duwan oo hurdo iyo soo-jeedis ah marka loo eego dadka da'da ah ama dadka waaweyn. Iyada oo ku saleysan macluumaadkaas, 1997dii toddobada dugsi sare ee dhammaystiran ee Dugsiga Dadweynaha ee Minneapolis ayaa u beddelay waqtiga bilowga dugsiga laga bilaabo 7:15 subaxnimo ilaa 8:40 subaxnimo Maqaalkani wuxuu baarayaa isbeddelka, isagoo helaya faa'iidooyin muhiim ah sida soo xaadiritaanka iyo diiwaangelinta oo la hagaajiyay. sicirka, hurdada oo ka yaraata fasalka, iyo yareynta niyadjabka ardaygu soo sheegay. Saamaynta siyaasadda ayaa si kooban looga hadlay, iyada oo la qirayo inay arrintani tahay mid si aad ah loogu soo oogay degmooyinka dugsiyada ku yaal Maraykanka oo dhan.
Waqtiyadii dambe ee bilowga dugsiyadu waxay keentay in ardaydu helaan hurdo badan, iyo heerar hoose oo maqnaansho iyo daahid ah. Isboortiga xoogaa saameyn ayuu ku yeeshay, tallaabadaasina waxay keentay murugo badan oo daneeyayaal badan.
Dugsiyada Dhexe Waqtiyada Bilowga: Muhiimadda Hurdo Habeen Wanaagsan u Leedahay Dhalinta Yaryar
Wolfson, A .; Isboorti, N. Dandrow, C .; Baroni, E. (2007)
Bilawga qaan-gaarnimada, dhalinyarada waxay u baahan yihiin 9.2 saac oo hurdo ah waxayna la kulmaan dib u dhac waqtiga hurdada. “Dunida dhabta ah” ee waqtiyada hore ee bilowga dugsiga, si kastaba ha noqotee, waxay soo sheegaan hurdo yar, farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya jadwalkooda iskuulka-dhamaadka usbuuca, iyo hurdo maalmeedka oo muhiim ah. Daraasadihii hore waxay muujiyeen in ardayda dugsiga sare ee bilaaba dugsiga dambe aysan dib u dhigin waqtiga jiifka laakiin ay helaan hurdo badan waqtiyada dambe ee tooska. Daraasadani waxay baareysay qaababka hurdada-jiifka ee dhalinyarada qaan-gaarka ah ee tagaya magaalooyinka, dugsiyada dhexe ee dowliga ah goor hore (7:15 am) iyo goor dambe (8:37 am) waqtiyada bilowga. Ardayda (N = 205) waxaa lagu qiimeeyay 2 waqtiyood. Ardayda dugsiga bilawday waxay ku warbixiyeen inay hurdada ka kacaan 1 saac ka dib subaxdii iskuulka waxayna heleen hurdo 50 min ka badan habeen kasta, hurdo yar, iyo qiimo jaban marka loo eego ardayda dugsiga hore. Dhammaan ardayda waxay soo sheegeen waqtiyada iskuulka la seexdo-habeenkii, dhaqanka nadaafadda hurdada, iyo jadwalka hurdada ee dhamaadka usbuuca.
Ardayda dugsiga dhexe ee dugsiyadda leh xilliyada bilowga dambe waxay seexdeen wax badan, waxayna u badnaayeen inay ahaadaan daahitaan ama maqnaansho.
Waqtiyada bilowga ee hadda
Degmadu hadda waxay leedahay 124 wadiiqooyinka gaadiidka - 86 waxbarasho joogto ah iyo 38 waxbarashada khaaska ah. Guud ahaan, jidadka waxaa loo kala qaadaa saddex heer:
Dugsiga sare (7:20 subaxnimo - 2:10 pm)
Dugsiga Dhexe (8 subaxnimo - 2:45 galabnimo)
Dugsiga hoose (9:25 subaxnimo - 3:45 galabnimo)
Wadahadalka Gudiga Wakhtiga Bilowga Dugsiga
Bulshada Dugsiyada Aagga Robbinsdale ayaa lagu casuumay inay maqlaan fikradaha ka imanaya degmooyin kale ee beddelay waqtiyada bilowga dugsiga. Degmooyinka ka qeyb galay waxaa ka mid ahaa Dugsiyada Anoka-Hennepin, Dugsiyada Dadweynaha Edina, Dugsiyada Dadweynaha ee St. Louis Park iyo Dugsiyada Dadweynaha ee St. Paul.
Dhacdadii farsamada ayaa la qabtay Khamiista, Febraayo 4, 2021.